NextMapping | NextMapping ™ Uchapupu
Isu takagamuchira zvakanyatsonaka mhinduro kubva kune vechikamu vesiyamu pazviitiko zvavo, izvi ndizvo zvavari kutaura nezvechikamu chako:
"Kudzokorora mashandisiro andinoita nguva yangu."
“Utungamiriri hune simba. "Munhu wese mutungamiri mune ramangwana rebasa zvisinei nemazita."
"Kufunga kwakakomba uye chikonzero chekuti nei munhu angave achiita chimwe chinhu nenzira iyoyo."
"Unyanzvi hwevakadzi hunodiwa mune ramangwana rebasa."
Iwe waita zvakakosha!
Uye heino mhinduro kubva kuchikwata changu:
Chirevo chikuru chaCheryl chaive pamoyo, akagovana pachena nyaya dzega dzega dzakanyatsobatana nevataipinda. Isu takaonga hukama hwake pakati pebasa neicho chaicho-hupenyu; zviri kuitika muhupenyu hwako chikamu chemabatiro atinoita kubasa. Iye nehunyanzvi anodhonza mameseji pamwe chete nekutsvagisisa kwake kwakakura achitsigira mapoinzi ake akakosha. Cheryl's bhuku rebasa chishandiso chakanakisa sosi yekuzvitungamira-kugadzirira yedu yega vhezheni yeramangwana rebasa.
Kubatanidza green screen uye kugadzirwa kwehunyanzvi kwakaita kuti iyi chaiyo yakakosha ive yakanaka sekuita kuti ataure mumunhu!
Ndatenda zvakare nekuwedzera kukosha kwakanyanya kuhurukuro yedu! Ini ndicharamba ndichitevera kufambira mberi kwako sezvaunoramba uchipa ruzivo rwakakura mune ramangwana rebasa.
C. Schroeder - Mutungamiriri, CME
Rave anoenda kuongororo yeCheryl's Virtual Keynote kubva kuEnbridge Gesi Hutungamiri Hwekuvandudza Chiitiko:
“Ndinokutendai kuchikwata nekuronga chiitiko ichi. Mukurukuri aibata zvakanyanya uye akapa matipi makuru ekuita. ”
"Ndakaona mukurukuri ari nesimba uye akapa mazano akakodzera kukambani yedu."
"Cheryl anofanira kunge akabhukwa kwenguva yakareba!"
"Cheryl hurukuro yako yakakosha hurukuro yanga iri chikamu chakakosha chemusangano wedu - ndinokutendai nekuchengeta kwenyu, nekugadzirisa uye nekukurudzira."
Chiitiko Kuronga - ServiceNow
Rave wongororo yeCheryl's Virtual Keynote kubva kuEBAA 2020 Online Musangano Unopinda:
"Uku kwaive kuratidzwa kwakanakisa uye nguva yacho yaigona kunge isiri nani nematambudziko azvino atiri kusangana nawo tese."
"Ini ndainakidzwa nesoftware mutauri wekutaura akashandisa - pamwe chakanakisa chiitiko chandakaona izvozvi (uye padhuze neyakaitika mu-munhu). Kuiswazve kwemufananidzo wake sezvakakodzera kune zvaive pasiraidhi yake. "
"Ndakafarira mashandisiro aCheryl papuratifomu izvo zvakaita kuti zvive nyore kutevera mharidzo yake uye nekutyora monotony."
"Pfungwa yaCheryl yekutsvaga kunzwisisa nekuwana nzvimbo yaunowirirana nayo nezvinhu zviri kutidenha, pane kuti tidzokere shure tichizama kurwisa izvo zvinhu, yainyanya kukosha uye panguva yakakodzera indasitiri yedu."
“Chikamu naCheryl chaive nesimba uye chinokurudzira. Mafungiro matsva ehutungamiriri nehungwaru zvinobatsira masangano, kana asiri kutoshandisa mamodheru, kuti abudirire mukuvaka zvikwata. ”
"Ndinonzwa simba uye ndakanangana neramangwana pane zvandakaita mune imwe nguva!"
"Mazano akanaka ehutungamiriri."
"Mharidzo yaCheryl yainakidza chaizvo, uye ndakadzidza matipi andingashandisa kubasa."
“Chinhu chikuru chinotyisa!”
"Akanaka mutauri akakodzera panguva - ndainzwa kubatana zvakanyanya pasocial mushure mechiitiko ichi."
"Waita basa, Cheryl, nekuratidza / kuratidza maonero ako - hurukuro yakanaka!"
"Ini ndaifunga kuti NextMapping yaive yakanaka uye iri panguva chaiyo. ”
"Nguva yakakodzera yenyaya iyi yenyaya!"
“Ndakafarira mashandisiro aaiita musoro wekutaura pazasi pemasiraidhi ake. Mamiriro ake ezvinhu haana kubva pamifananidzo yemasiraidhi semugumisiro. ”
"Cheryl anga akanaka!"
“Kuda izvi. Kusimbiswa kwetsitsi kunodiwa. ”
"Mapinduriro ekudyidzana anga achiwedzera kunaka kumharidzo."
"Keynote mutauri aive neruzivo uye aikurudzira ramangwana."
“Zvaifadza! Chirongwa chako chaicho chaiitwa uye chaiitwa uye chichiita kuti vateereri varatidzike mukati. "Yaivapo."
Sachigaro weMusangano - EBAA
"Zvakanaka tinogona kutaura nokutendeka chinyorwa chaCheryl chainyanya kutarisirwa nevateereri kubva munhoroondo yedu yemakore makumi mashanu yekuita chiitiko ichi."
Nekunyora kwemibvunzo nemavhoti vhoti, vateereri vakaitwa kuti vanzwe sechikamu chehurukuro - kwete chinhu chakareruka!
Cheryl's keywords maitiro ndeekugadzira uye anoratidza izvo zvaanotaura nezve 'hutungamiri hwakagovana'. ”
“Kwakanaka. Ndatenda! Uye ndatenda zvakare neiyo huru hurukuro, podcast uye cheki chikamu. Ini ndawana matani emhinduro yakanaka pane zvese. Thanks zvakare! ”
H. Wetzel, Sr. Director Kushambadzira uye Nhengo Yekukurukurirana - NRECA
Rave wongororo kubva kuBMO Ramangwana reBasa Chiitiko Vanopinda:
"Kudzidza kwakanaka uye kufunga pfungwa mangwanani ano nezve Ramangwana reBasa - Ndatenda."
"Cheryl akafara kwazvo isu takakwanisa kukuunza iwe kune vatengi vedu kuCanada, yako yekumberi tsvagiridzo uye nekuona ndiko kune nyika yave kutonanga! Kwete izvozvo chete, asi iwe uri mufaro wechokwadi wekushanda pamwe. Zvave zvichifadza. ”
"BMO yakagamuchira" Ramangwana reBasa - Maitiro Ekuve Ramangwana Rakagadzirira Mutungamiriri "seminari svondo rino naCheryl Cran. Munyika yeotomation uye digitization, zvakakosha kuti unzwisise kuti kufambira mberi netekinoroji kunowedzera mikana yekubudirira, uye kuve nezvikwata zvakanakisa zvinoenderana uye zvinogona kugamuchira shanduko kunounza mibairo, kwete kudzikisira mabasa. Izvo ndezvekugonesa zvikwata kuti zvive zvinoshanda zvakanyanya uye kutarisa pazvinhu zvakakosha zvebhizinesi. "Mumwe mutengi akambondiudza kuti aida kuita mashoma kubhengi uye kuita bhizinesi - idanho rekugadzirira basa remangwana."
“Maita basa, Cheryl, nemusangano unofungisisa. Iwe wakutsamwisa yakawanda yehunhu kuratidzwa kubva kune vese vatengi vedu nevashandi vedu varipo nhasi. Zvakare, ndinokutendai nekunakidza sidebar re: hukama uripo pakati peotomatiki neUBI -kurukurirano huru! "
“Musangano mukuru pamasangano akagadzirira ramangwana nevatungamiriri vakagadzirira mune ramangwana! Pamwe chete, ngatichinjei "ini" pfungwa kune "isu" pfungwa! Ndiri kutenda kwazvo neruzivo rwawakagovana panguva yemusangano. Ndamirira kuti ndiverenge mabhuku enyu! ”
“Mangwanani anokurudzira uye anonakidza nevatengi vedu veBMO Financial Group Canadian Commercial Banking naCheryl Cran. Tekinoroji munzvimbo yebasa inofanirwa kushandiswa kugadzirira ramangwana nekutarisa kuti tekinoroji inogona sei kusimudzira mibairo yevanhu. Chaive chiitiko chekuvhura maziso kuti udzidze maitiro aunogona kutora matanho nekukasira kuti uwedzere kutengwa kwechikwata, kuchinjika uye kuuraya. "
"Cheryl chirevo chako chikuru pane," Chinja Hutungamiri & Ramangwana reBasa, "yaive yakakwana kuboka redu revatungamiriri uye kune vese vatinoshanda navo pasi rese.
Boka redu rakafara kuva newe muLas Vegas musoro hofisi uye isu takave nerakawanda mhinduro dzakanaka kubva kune wese wese-pane uye kubva kune vapenyu kurwizi vatori.
Isu takaona yakawandisa yehurukuro ye Twitter nezve mamwe emano ako pane zvekutungamira hutungamiri uye ramangwana rakadai se'kufundidzira 'uye kuputsa silos.
Tese takashuva dai takave nenguva yakawanda nemi!
Ngatirambei tichikurukura nekubatana munguva yemberi - ndatenda futi.
Global Senior Manager, Mhando - Aristocrat Technologies
Rave 'zvinyorwa' wongororo kubva kuASQ Musangano Vanopinda:
"Iyi ndiyo mharidzo yakanakisa uye yakakwenenzverwa yemusangano wese."
“Iyi inzira yakanaka yekukurudzira kutora chikamu uye kubatsira vanhu kuti vanyatsokuteerera. Kutenda nekugovana iyi hunyanzvi nzira uye yakanaka zvemukati. ”
“Ndiri kutemerwa moyo nesimba rako rakakura uye nekushushikana kwako. Ndinoda kushamwaridzana uye kuwana mazano enyu. ”
"Anotyisa, Asingakanganwiki, Anovaka, Anofungidzira - NDATENDA"
"Ndatenda! Ndicha. Mharidzo yakanaka nhasi. Iwe wakazunza !! Ndichaverenga bhuku renyu nomufaro. ”
“Tinotenda zvikuru kuda kwako kugovana hurukuro yako nezvimwe zviwanikwa. Zvinotaridza chivimbo chako uye hauna hanya nekugadzira bhizinesi rekungotarisa. ”
"Mutsvene! @ $ & Yakasarudzika mharidzo! Ndatenda."
“IDA kudyidzana uye zvinozorodza zvemukati”
"Ah Vakadzi Vakuru - Maita basa nekusimbisa zvakare" shanduko mutemo wehupenyu "
“Uri kundikurudzira, Cheryl!
"Hukuru! Iwe wakataurawo zvakanyanya pane izvi panguva yako yekuratidzira. Kutenda zvakanyanya nekutinyima nhasi. Ndashandurwa.
"Maita basa, mune simba uye munokurudzira."
“Chikamu chikuru chekudyidzana. Kutenda nekukurudzira uye nekuita! Zvakanaka."
“Ndakaida. Chaizvoizvo kuratidzwa kwemusangano. Ndatenda!"
"Yakakura hurukuro yekutaura !!! Ndiri psyched! Kukura kukuru kwekuseka, huchenjeri, kubatanidzwa uye kurudziro senguva dzose Kugona kusvika zvino! ”
“Mharidzo inoshamisa ramangwana rako rakanaka pamberi pevanhu rinotapukira. Maita basa nekutikurudzira. ”
“Chikamu chakanakisa kusvika pari zvino! Simba uye rinokurudzira ”
"Cheryl aive mutauri wedu wekutanga wekutanga kuInnovation Unplugged Skills Summit muToronto.
Kubva pakutaurirana kwedu kwekutanga zvaive pachena kuti Cheryl aive neruzivo kwazvo mune Ramangwana reBasa uye akatora nguva yekunzwisisa zvinangwa zvesangano redu uye chiitiko chedu. Mharidzo yake yaive inobata uye inodzidzisa uye nekumisa rakasara zuva redu zvakakwana. Isu takave nevateereri vakasiyana vaisanganisira vadzidzi vesekondari vadzidzi, varairidzi, maindasitiri nyanzvi nevakuru vehurumende Wese munhu akatora chimwe chinhu kubva mukutaura kwaCheryl ndokutaura pamusoro pesimba rehurukuro mumhinduro dzavo dzemhinduro. "Ndingafarire kushanda naCheryl zvakare mune ramangwana."
Namir Anani - Mutungamiri weICT uye CEO
"Ndakanakidzwa chaizvo nehurukuro yako yekutaura. Ini ndakatorwa moyo ipapo uye ndikada kudyidzana. Kupfuura zvese, kuda kwako ramangwana mune basa uye bhizinesi kwakaita kuti mharidzo yako inyanye kukanganwika. Ndokumbira undizivise nezve zviitiko zvenguva yemberi nemapurojekiti mauri kuita. Ini ndingafarire kukunzwa iwe uchitaura zvakawanda nezve hunyanzvi uye hunyanzvi.
Zvaifadza zvechokwadi kunzwa uchitaura. Ndinovimba tinosangana, munguva pfupi iri kutevera. ”
Giredhi 9 Guest - ICTC Innovation Summit
"Cheryl aive mutauri wedu wekutanga wekuvhura yeAGA National Hutungamiri Hwekudzidzisa uye aive akashamisa!
Mushumo wake wakapihwa musoro unoti, "Unyanzvi Hwokuchinja Hutungamiri - Maitiro ekuFlexx muFlux" uye meseji yake yaive panguva chaiyo uye yakakosha zvakanyanya kune vatinotora chikamu. Isu takagamuchira inofadza mhinduro kubva kuboka redu nezve Cheryl's inesimba dhirivhari yekuendesa, iko kuvhota uye Q&A kudyidzana, uye ongororo yaakatumira kune vatori vechikamu kuti vazive vateereri vake uye vagadzirise mharidzo yake. Mashoko ekutanga aCheryl akatanga musangano wedu nesimba guru - takada mavhidhiyo nemumhanzi zvakaita kuti munhu wese afare kwezuva rese. ”
J. Bruce Director we Misangano
"Cheryl Cran aive mutauri wedu wekutaura pachiitiko chedu chehutungamiriri chegore uye mune izwi mushasha. Maonero akasarudzika aCheryl nezveramangwana rebasa uye izvo zvinodiwa kuti makambani ave pamucheto unotungamira kwakaunza kukosha kukuru kweboka redu. Akaita nguva achitaurirana neni uye nehutungamiriri timu pane yedu tsika yakasarudzika uye maitiro ekuwedzera zvataive tichitoita nemazvo. Vatungamiriri vedu vakapa zvigunwe zviviri pamusoro pechitaira chekutakura chaCheryl chaimhanyisa, chakananga uye chine simba. Uye zvakare, vatungamiriri vakanakidzwa chaizvo nekuti Cheryl akabatana nesu pamanheru edu enharaunda. Chandakawana chakakosha kwazvo sa CEO wekambani yaive ongororo pamberi pechiitiko iyo yaakaisa mune yake yakakosha uye iyo chaiyo nguva yekuvhota nekutumira mameseji izvo zvakanyatsobata redu rinonzwisisa boka revatungamiriri. Cheryl haana kungotaura nezveramangwana nemaitiro iye aakatipa shanduko dzehutungamiriri maturusi ekuumba danho redu rinotevera rekubudirira. ”
"Ini handikwanise kutenda Cheryl zvakakwana neshoko rake rinokurudzira uye rinodzidzisa pamusoro peKukwezva Vanogadzira Shanduko kuJLT Canada Public Sector Summit 2018. Chikamu chake chakanyatsoenderana nevateereri vedu vemunharaunda, asi semireniyamu chinangwa chekuchinja shanduko rimwe zuva, Chikamu chaCheryl chakamhara zvakanyanya zvakanaka neni. Uye vamiriri vedu havana kumira kutaura nezvezvinhu zvinofambiswa kumharidzo yake - zvakashanda chaizvo senzira yekubatanidza munhu wese, chaiko! "
P. Yung Kushambadzira uye Kutaurirana, Jardine Lloyd Thompson Canada Inc.
"Cheryl aive mutauri wedu wekuvhara musangano wedu wepagore weTLMI. Aive akanyanya kurohwa neboka redu - yake yakakosha yakapa nzwisiso uye kutsvagisa nezveramangwana rebasa zvaive zvine chekuita neboka repamusoro rinoita. Isu takada kuti Cheryl akawedzera sei kubata kwakasarudzika senge pikicha yechiitiko chedu chekugamuchira vaeni manheru apfuura uye akataura mumwe wemitezo yedu kubudirira achipa ruzivo rwehunyanzvi zvakare. Iko kutumira mameseji uye kuongorora kwehukama kwaive kwakasarudzika uye kwakawedzera imwe nhanho yekubatanidzwa kwakanaka kwevateereri. Takada kushanda naCheryl uye boka redu raimudawo. ”
D.Muenzer Mutungamiri, TLMI
"Cheryl Cran aive mharidzo yedu yekuvhura mharidzo pa2018 CSU Equipment Management Musangano uye aive akanaka! Mharidzo yake yekuchinja, kushinga pamwe nekubatana ndizvo chaizvo zvaida kunzwiwa neboka redu. Remangwana harifanirwe kutya kana mumwe achizoziva kuti ndiwe mugadziri. Akagovanisa zvishandiso zvinoshanda izvo isu tese tinogona kutora nekudzoka nekukurumidza ipapo kuti tiwedzere kubudirira kwechikwata. Kushandiswa kwaCheryl kwekutumira mameseji nevateereri uye kuvhota kwakafarirwa zvikuru uye boka redu rakabatana naye vachishandisa zvishandiso izvi. Ini ndaida kupindurwa nemwoyo wese Cheryl mibvunzo yemeseji kusanganisira iyo yakaoma. Kuverenga mameseji mibvunzo kwakakurudzira kutaura kweveruzhinji kwekunetseka kwemoyo. Vakawanda vakapinda vakashuma kuburikidza negwaro neTwitter kuti Cheryl kuvhura keyword kunogadzirisa toni yemusangano wemazuva maviri wakabudirira. "
N.Freelander-Paice Dhairekita weRuzivo Zvirongwa, California State University, Hofisi yeChancellor
"Cheryl Cran ndiye Wechokwadi 'Deal'
Iko hakuna nani kukurudzira inotaurwa, nyanzvi yekukurukurirana psychology, uye shandura hutungamiri hwekudzidzisa kupfuura Cheryl Cran. Cheryl anotendeseka zvachose, akavimbika, akajeka, uye anokwezva sezvaanorondedzera hupenyu hwake zviitiko kune zanhasi bhizinesi nemamiriro ezvinhu ebasa.
Ini handina pendari mukumurumbidza kune chero kambani yeFortune 100 iyo iri kubata nekuchinja kwakanyanya mukushanda kwavo.
Nyika yaizove nzvimbo iri nani kana vakatevera kuraira kwaCheryl uye kurudziro yavo patariro yekuenderana nevamwe uye nemabatiro avangaite. ”
C. Lee Mutungamiri, Raytheon Vashandi veVashandi
"Cheryl Cran aive mutauri wedu mukuru kumusangano wedu wehutungamiriri uye yake yakapihwa musoro unoti: Kutungamira Ramangwana Redu - Kutungamira Shanduko Kuti Usvike Paive nemharidzo-yake uye kuendesa kwake kwakakwanira zvakakwana boka redu.
Kuongorora kwaCheryl nezve ramangwana rebasa uye shanduko dzinofanirwa kuitwa nevatungamiriri kuti vasvike pakakodzera nguva uye kwakakodzera boka redu. Tsvagurudzo yake pamwe chete nekuburitsa zvine simba kwakagadzira kukosha kukuru kuboka redu rekunzwisisa revatungamiriri. Boka redu rakabatanawo nemufaro mukunyora kwemanyorerwo emibvunzo uye kuvhota kwakaitwa naCheryl mugwaro rake repamusoro. Kufemerwa pamwe nepfungwa dzinoshanda zvaingova zvishoma zvezvakatora zvakanyorwa naCheryl.
Chiitiko chedu chehutungamiriri chakabudirira zvikuru uye tinosanganisira hurukuro yakataurwa naCheryl sechiitiko chekubudirira kwese. ”
B. Murao Mutevedzeri Wenyanzvi, Bvunzo dzeCB
"Cheryl Cran aive mutauri wedu wekutanga pamusangano wedu wehutungamiriri uye hurukuro yake yakanzi:" Unyanzvi hweKuchinja Hutungamiri - Ita kuti zviitike Zviite zvakakosha "yaive budiriro huru neboka redu rehutungamiriri hwechitoro.
PaRubicon isu tiri kukura uye tichiona mijenya yemukati inofambiswa shanduko uye nekune kunze kwakaiswa shanduko. Kuongorora kwaCheryl uye kurongeka kwechikwata chedu kwakaita kutibatsira nesu.
Takaonga mameseji, kuvhota uye kudyidzana pamwe nezvinoshandisika zvirimo, mazano anoshanda uye nekutevera mhinduro kumapato zvinyorwa zvemibvunzo.
Cheryl akazadzisa zvinangwa zvedu uye akabatsira vatungamiriri vedu vezvitoro kufunga nenzira nyowani uye dzakakwirira nezvekuchinja, kusangana kwebhizinesi uye kubudirira mune ramangwana. ”
R. Kutarisirwa COO, Rubicon Pharmacies
"Cheryl Cran anga ari mutauri wedu wekutaura pamusangano wedu wapfuura weMISA BC wemaguta eIT nyanzvi - Cheryl's yakakosha yakakunda neboka redu!
Ndakaonga zvinhu zvakati wandei neshoko rakakosha raCheryl - pakanga paine chiyero chakakwana chemukati, kutsvagisa uye mazano pamwe nekurudziro.
Mhinduro kubva kuvavakapinda yakanga iri chinhu chakanakira uye vakaonga nekugona kwemavara kunyorera mibvunzo kuna Cheryl nemhinduro yake yakatendeka pamwe nekuvhota kuita boka.
Vakapinda vakasiya runyoro rweCheryl kunzwa vachisimbiswa, kufemerwa uye vakagadzirira kutora pfungwa nezviito kudzoka kubasa uye kuiswa ipapo kuti ubudirire.
Cheryl akapfuura zvataitarisira! ”
C. Crabtree Komiti Yenhaurirano, Matare Ruzivo Systems Association of BC (MISA-BC)
"Ndinokurudzira zvikuru Cheryl Cran seremangwana rebasa uye shandura nyanzvi yehutungamiriri vanogona kukubatsira kufambisa ramangwana rako munyika ino yeshanduko. Ndakave nevarairidzi vakanaka chaizvo mukati memakore angu kuchikoro. Makochi makuru akajeka kana iwe ukaona mhedzisiro muboka revanhu vanoshanda pamwechete seboka rakabatana. Mitambo, mimhanzi, kutamba - ese ane mibairo uye kuzivikanwa kwevarairidzi vakakura. Iko kudzidzisa kwandinoitira vashandi vangu kwanga kuri zvinhu zvidiki zvechikwata. Ndaiziva kuti kana ndaida mashandiro echikwata chehunyanzvi ndaida murairidzi wehunyanzvi. Cheryl Cran ndeye izvo kuMyMutual's Hutungamiri Timu. Takatanga kusangana naCheryl Cran muna2014 paakakumbirwa kuti ave mutauri akakosha pamusangano wedu wegore rese weBroker. Cheryl akauya mangwanani, akasangana nevakange varipo ndokupa yakanakisa chirevo pane Leading Change. Cheryl mutauri wepamusoro notch mutauri. Nzira yechipiri yandinoziva Cheryl ndeye Executive Coach. Iye anga ari ese murairidzi uye chipangamazano mukukura kwangu pachezvangu sa CEO. Uye zvino ndiye murairidzi wechikwata chedu cheUtungamiriri, achitidenha uye achitiita kuti tizvidavirire. Yedu Yehutungamiriri Chikwata chiri kutora iyo InoteveraMepu Online Kutungamira Kudzidziswa kosi yakapihwa naCheryl Cran. Iwo makosi anowanikwa online uye anosanganisira imwe pane imwe varairidzi mafoni. Isu tinokwanisa kushandisa zvatiri kudzidza mumamiriro ezvinhu ehupenyu chaihwo nerutsigiro rwemurairidzi wechikwata chedu. Nzira dzakatsiga idzo kudzidziswa kwaCheryl nekubvunzana kwakabatsira iyi:
Kujeka pane chinangwa chedu uye chiono chakatibatsira kuwedzera mushandi uye kukosha kwevatengi
Kutungamira pakuve ne 'vanhu chaivo' pachikwata kuti vatyaire bhizinesi mune ramangwana
Kukurudzira uye zvakananga zviwanikwa kutibatsira isu kuhaya, varairidzi uye nekukura nhengo dzechikwata chedu
Kufambiswa kwechikwata chehutungamiriri kuti chiwedzere hunyanzvi seti, kushandira timu uye kubatirira kuzvinangwa
Kutibatsira kuti tiwedzere kufunga kwehurongwa, kugadzira hukama hwehutungamiri hwakawedzerwa uye kuwedzera kubatana kwevashandi
Kuwedzerwa simba uye mufaro nezveramangwana uye nemabatiro atingaite sechikwata ”
V. Fehr - CEO MyMutual inishuwarenzi
"Takadzoka naCheryl kechipiri kuti tifambise uye tisimbise kudzoka kwedu kwegore nehafu kuvashandi vedu veguta, vagari vakasarudzwa, vemabhizimusi nevamwe vanobatana neguta, uye kwakave kubudirira kukuru. Isu takave nevanopinda vaiti zvaitove nani gore rino kupfuura gore rapfuura uye zvinonzi zvine hunyanzvi uye hunyanzvi hwekufambisa, kutaurirana nevatori vechikamu pamwe nekugadzirira. Cheryl akataura neumwe neumwe wevatauri vatauri pane ajenda pamberi pechiitiko uye akave nechokwadi chekuti ajenda inoyerera kuitira kuti pave nemhedzisiro yepamusoro pakudzoka kwese. Dingindira redu raive 'NextMapping' ramangwana rebasa kusanganisira hunyanzvi, tekinoroji, hutungamiriri uye tsika. Hurukuro yake yakakosha mukati mekudzoka kwaisanganisira kuvhura, kuvhara kwezuva rekutanga uye nekuvhara kwezuva rechipiri. Cheryl ane yakasarudzika kugona kuunza inoenderana uye inokurudzira nzira inogadzira mhinduro mbiri pamwe nenzira dzinoshanda dzekushandisa iwo mazano akagovaniswa. Muhurukuro yake yakavhurika, akaisa toni inokurudzira pane ramangwana rebasa kusanganisira kukanganisa kwetekinoroji uye kuti vanhu vanofanirwa kuchinjika sei nekukurumidza kumhanya kweshanduko. Chirevo chake chekuvhara pazuva rekutanga chakanangana neKuteveraMepu remangwana rehutungamiriri uye zvazvinoreva mune ramangwana rebasa rezvikwata uye vezvemabhizinesi. Vatauri pane ajenda vakafukidza maguta akachenjera, mabhizimusi epasi rese, hunyanzvi, kufunga kwekugadzira, nhoroondo yekuchengetedza dhijitari, drones nezvimwe. Pazuva 1.5 Cheryl akadzokorora zuva rese nehafu uye akaisa zvinhu zvakakosha kubva kumutauri wega wega muchirevo chake chekuvhara. Nguva imwe neimwe yatakashanda naCheryl isu takabatsirwa nekuwedzera hunyanzvi, uye kubatana mukati medu timu timu. Tinoona Cheryl sechikamu chakakosheswa chedu chegore rose rekutarisa tarisiro uye tinotarisira kuzoshanda naye kakawanda, kakawanda mune ramangwana. ”
W. Foeman - Guta Munyori Guta reCoral Gable
"Cheryl aive mutauri wedu mukuru kuUVA Wise Economic Forum uye akapa" Ramangwana reBasa rava ikozvino - Wagadzirira here? " Mhinduro kubva kuvateereri vedu yaisanganisira zvirevo zvakaita seizvi: "Inonakidza uye inokurudzira kuona nezveramangwana" "Ini ndakada musanganiswa wezvinoitika pamwe nePush yekutibatsira kuti tive neunyanzvi" kubudirira mune ramangwana "" Kwakanaka kutsvagisa uye huwandu pane ramangwana rebasa uye kukosha kwaro kune zvese dzidzo uye bhizinesi "" Rakafuridzirwa naCheryl Cran "Tine chokwadi chekuva naCheryl kudzoka kuti tipe ruzivo rwakawanda nezveramangwana rebasa, hunyanzvi uye shandura hutungamiriri."
B. Joyce University Virginia kuWise
“Cheryl Cran aive nemukurumbira pamusangano wedu we ISBN. ZveCheryl zvemukati zvakanyatsorongedzwa kuboka redu revatungamiriri veC-Level sezvo zvakavabatsira kuronga musangano uzere nemazano kuita sekongiri zano rekufambisa sangano ravo kumberi. Boka redu rinonzwisisa uye rinogona kutsoropodza maspika kunze kwesalon uye spa indasitiri, asi Cheryl's keyword ine simba uye yaive pachokwadi pamari. Cheryl akagadzirisa chirevo chake cheboka redu, Ramangwana Rebasa Rava Izvozvi - Salon Yako Yakagadzirira Here? uye meseji yake yaive chiyero chakakwana chekutsvaga, mazano akakodzera, kujekesa kutaridzika mune ramangwana pamwe nekugadzirira kukanganisika mune ramangwana. Kusiyana nemanyowani ezvinyorwa, Cheryl akanyatso kupa zvinhu zvekuteedzera, kusanganisira vhidhiyo bhurogu uye zvakare akapa kune vanoongorora pamwe nekuitisa hupenyu hwekuvhota uye kusanganisira yavo mhinduro mune yake inokosha. Isu zvakare takave naCheryl anofambisa hurukuro yekukwezva pamusoro pekukwezva tarenda repamusoro uye boka rake raive rakamira nzvimbo chete. Taisazeza kumukurudzira kune vamwe. ”
V. Tate Executive Director International Salon Spa Bhizinesi Network
"Cheryl Cran aive mutauri wedu wekutanga uye musangano wekufambisa weCalgary Stampede Leadership Summit. Her keyword: Yemberi Yakagadzirira Matimu - Maitiro Ekugadzira Anogadzikana, Anochinjika uye Emangwana Akagadzirira Matimu aive anoshamisa uye aifadza kwazvo kuvanhu vedu vatungamiriri.
Panguva yemusangano, vazhinji vevanhu vedu vatungamiriri vanonyorera Cheryl panguva yekukosha uye vairumbidza kwazvo nezve tsananguro yake yakazara uye mhinduro dzechokwadi. Vatungamiriri vedu vevanhu vaifara nezve izvo zvirimo uye vaine shungu yekushandisa izvo zvavaidzidza kumabasa avo. Nguva yaCheryl uye kutarisira mukugadzirira nekusimbisa kuti aienderana neboka redu kwakakosheswa zvikuru kusanganisira ongororo yake yekutanga kune vaipinda, kupindirana kwekuvhota panguva yeshoko reruzhinji pamwe nemeseji yemibvunzo. Cheryl akateedzera zvayinoita senge kuwedzera tekinoroji apo uchiita nekukurudzira vanhu kuti vabve 'kwandiri kuenda kwatiri'.
Cheryl akapa ruzivo rwakanakisa mune ramangwana maitiro anokanganisa bhizinesi uye akapa mamwe mazano ekugadzira maitiro atingaita kuti tibudirire kubudirira kwedu. Maitiro aCheryl anonzwisisika, tsvagiridzo yakavakirwa uye inofambidzana zvakanyanya yaive yakakodzera zvakakwana kune yedu boka rinonzwisisa revatungamiriri. "
D. Bodnaryk - Mutungamiriri, People Services
Iyo Calgary Exhibition uye Stampede Ltd.
"Ndakave nemufaro wekubatanidza Cheryl Cran weboka rakakura revashandi vese, inosanganisira mazana emazana evashandi. Cheryl akaunza Remangwana reBasa rava Zvino - Wagadzirira here kwezuva rakareba chiitiko. Akaendesa kwete kero chete, asiwo chirevo chekuvhara chezuva racho kusimudzira pfungwa / zvinoreva kuita ruzivo rwevanopinda. Isu takafarira kugona kwake kwekuisa zviitiko zvezviitiko zvese zvezuva iri mumhedziso yake yekuvhara - yake yakasarudzika uye inonzwisisika yekusimudza pane yakasarudzika tsika yeboka yakanyatso kumira. Vaya vaivepo pazuva iri vakatsanangura hurukuro yakataurwa naCheryl seinopa simba uye ine simba. Mumwe munhu akagovana kuti akagadzira simba rakawandisa, zvaive nyore kuwana mufaro nezve izvo zvaiitika mukamuri. Chinyorwa chakakosha uye chekuvhara chaCheryl chaive chinhu chakakosha pamusangano wedu wezuva rose, zvichiwedzera zvakanyanya 'pakubudirira. Tinogona kufunga nezvekushanda naye zvakare uye ndinokurudzira Cheryl Cran semutauri kumasangano akasangana neshanduko kana vangangoda kuongorora misoro yeshanduko, bhizinesi maitiro, kana kurudziro. Ndinokutendai, Cheryl nekuti mune nzira yakanaka nemashoko. ”
L. Masse Akakwira Ground
"Cheryl ndiye akakodzera zvakakwana pamusangano wedu weRamangwana - isu tine boka rinonzwisisa zvikuru revatungamiriri vemubatanidzwa wechikwereti vanozvitutumadza nekuve pamberi pekutungamira Uye Cheryl akavapa nharo kuti vafunge zvakatowanda, kutambanudza maitiro avo ekuvandudza pamwe neku kuvaka mazano emangwana zvichibva pane zvinokurumidza kuchinja zvirimo muindasitiri yemabasa emari. "Tinokurudzira Cheryl Cran kunge ramangwana renyanzvi yebasa uye mutauri wezwi."
J. Kile Futures Summit Musangano weVatongi MN
"Mharidzo yaCheryl paRamangwana rebasa yakapa nguva yekudyidzana uye yekuita kuti titange chiitiko chedu. Vashanyi vedu vaida zvikuru vateereri kutora chikamu uye zviito-zvine humbowo zviito zvavaigona kutora pakarepo kuzvikwata zvavo kuti zviite. Akaiburitsa mupaka kune vateereri vedu vanosvika mazana matatu nemakumi matatu eHR, vachitsvaga uye nevashandi vekuvandudza matarenda. ”
J. Palm, Executive Director TeamKC: Hupenyu + Tarenda
“Pagungano redu revashandi vegore rino, Cheryl akapa hurukuro inosimudzira uye inodzidzisa nezveramangwana pamusoro pebasa nebasa nemabatiro atinoita patiri. Akashanda padhuze nesu kurongedza kero yake kuti ione kuti yairevesa uye yakakodzera kune vashandi vedu. Kutaura kwaCheryl kwaifadza uye kwakapa simba rakanaka. ”
"Cheryl aive nyanzvi yekushanya pamusangano wedu wepagore wehutungamiriri - akataura nezvesimba rekuchinja uye kutungamira tarenda. Padanho repamusoro takawana nzira yaCheryl, yekumhan'ara neboka revatungamiriri uye mhando dzaakaratidza dzainyatsoenderana nezvinangwa zvedu zvemusangano. Mhedzisiro yacho ndeyekuti zvakatisiya tichida kuziva zvakawanda nezvedanho rekuchinja uye nekutarisisa kuti tingatsigira sei vatungamiriri vedu kuti vazochinja-chinja.
WB, Tsvagiridzo & Kubudirira BASF
"Boka redu rakarongedza Cheryl 10 kunze kwe10 semutauri wedu wepamusoro. Iye aive akakurumbira wedu wepamusoro akakoswa mukuru wekutaura pamusangano wedu. Akapfuura zvataitarisira! ”
CEO National Agra Kushambadzira Association
"Cheryl akatishandira panzira yedu yekutanga yekudzokera kuguta. Kudzoka kwakanangisa pamisoro yakafara yehunyanzvi uye shanduko yehutungamiriri. Takakoka masipika kunzvimbo yedu yekudzokera yaive vatengi vemukati nekunze kusangano redu. Unyanzvi hwaCheryl hunogona kuoneka mune zvese zvinosanganisira kuronga-mberi kwechiitiko uye panguva yezuva nehafu yekudzokera kure. Panguva yekudzoka, Cheryl aive nehunyanzvi mukubatanidza pamwe nekubatsira mutungamiri wega wega kuronga ramangwana ravo ivo nebhizinesi ravo. ”
W. Foeman Guta reCoral Gable
“Ndakashanda naCheryl kanoverengeka uye chiitiko chega chega anoigogodza kunze kwepaki. Iye anoteerera kune izvo zvaunoda uye izvo zvauri kuyedza kuzadzisa pamwe nechiitiko chako, anounza meseji inoshanda nezvirangaridzo zvinoonekwa zvinokurudzira vateereri. Kuongororwa kweyekuratidzwa kwaCheryl anogara ari mamaki akakwirira. Iye akatendeka, ane simba uye nyanzvi. Anonunura nguva dzese! ”
“Takakoka Cheryl kuti abatana nesu semutauri mukuru wemusangano pagore re2017 Canadian Association for University Kuenderera Dzidzo musangano. Cheryl runyoro rwekuti "Kutungamira Mune Iyo Currents Ye Shanduko" yakanga yakanakira boka redu revadzidzisi. Cheryl akagadziriswa nekutarisa vaaipinda navo nguva isati yasvika uye akagadziridza hurukuro yake kuti igadzirise zvatinoda zvakasiyana uye mamiriro ezvinhu. Vamiriri vemusangano vaikoshesa izvi zvakagadzirirwa kusvika. Cheryl chinyorwa chikuru chakapokana nemafungiro edu pamaitiro atinofanira kuita zvigadzirwa zvekusimudzira sevatungamiriri vekuchinja uye kuti tinofanirwa kugadzirira sei vadzidzi vekuenderera mberi kuti vave vakagadzirira basa ramangwana. Mhando dzaCheryl pamatanho ekuchinja uye pamatanho mana okusimudzira hutungamiri aive maturusi anobatsira atinogona kutora uye kushandisa ipapo. "Tinokoshesa nzira yaakabatana nayo yekuita kuti musangano wedu ubudirire."
Dean pro tem Hupenyu hwese Kudzidza Simon Fraser University
"Cheryl Cran ndiye akavhara mutauri mukuru wekutaurira yedu 2017 Worker Experience Tour muAtlanta neChicago, uye aive akanaka! Simba rakakura kuvhara zuva uye kusiya vanopinda vakafuridzirwa kutora danho. Remangwana raCheryl rekutsvaga kwebasa rakaratidza kukosha kwekutarisa pane ruzivo rwevashandi senzira yekugadzira yakakura yevatengi ruzivo. Akapa vese mazano uye mhinduro kune vatungamiriri kuti ramangwana ravo rive rakagadzirira. Mhinduro kubva kuvaipinda yaive yakanaka uye vaifarira kuti Cheryl akanyatsoita kuti vafunge! Cheryl aive chaiye mutambi wechikwata. Zviitiko zvedu zvakabudirira chaizvo, uye tinomutenda nezvaakaita. ”
Kushambadzira Director Appirio
“Isu nguva pfupi yadarika takave nehunyanzvi hweRamangwana reMabasa Cheryl Cran saMutauriri weKeynote pamusangano wedu wepagore weProjekti World / Bhizinesi Analyst, uye neshoko anga ari mukuru! Vapindi vedu vakaverenga Cheryl semumwe wevatauri vepamusoro uye hurukuro yake "Ramangwana reBasa Rava Izvozvi - 5 Shanduko Dzakakura dzeRamangwana" yaive yakakunda. Maonero aCheryl ekutaurisa kuzwi rake akakosheswa - aisanganisira data rakaongororwa kubva kune vaivepo uye mune yakakosha akapa mhinduro dzakagadziriswa uye mazano anogona kuiswa mukuita ipapo kune vateereri. Iyo combo yesimba rine simba, hutungamiriri hwekufunga, chaicho uye chakakosha zvemukati pamwe nekunakidzwa uye yekuita maitiro yaive nzira yakanaka yeboka redu revanoona vatungamiriri vepurojekiti uye vanoongorora bhizinesi. Tinotarisira mukana wekushanda naCheryl zvakare. ”
Boka Chiitiko Director ProjectWorld*BhizinesiAnalystWorld
"Panzvimbo yeLegal Innovation Zone neLexisNexis Canada, ndinoda kukutendai nemharidzo yenyu yemutsindo kumusangano wedu weInovation neMuvhuro. Iyo mhinduro yatatambira nezve chiitiko uye chako chirevo, kunyanya, yanga isiri chinhu asi yakanaka. Mharidzo yako ndiyo yaive nzira yakanaka yekudzokorora nayo zuva, tichifunga nezvekuvandudza nenzira yakajeka. "
Project Manager Zvepamutemo Innovation Summit Team
"Takanga naCheryl aripo," Hutungamiri Hweshanduko - Kuputsa Sirosi "kumusangano wedu wePRSM uye akabatwa neboka redu rekunzwisisa revapinda. Mune basa rekutengesa zvivakwa, vazhinji vevatinosangana navo vanopikiswa kuti vangashanda sei, kuumba uye kutungamira pamazinga akakwira. Chikamu chaCheryl chakapa kutsvagisisa nezveramangwana rebasa, ruzivo runotsigira pahutungamiriri hunodiwa, uye mazano ane njere pamusoro pema bhiriji ekuvhara silos nekuvaka tsika yekubatana pamwe nekugadzira. Chimiro chake chesimba rakanyanya uye kushandiswa kwekudyidzana kunonakidza, mafirimu emavhidhiyo uye mavhidhiyo kusanzwisisika kwakachinja. Cheryl akapa mafoni kune chiito uye mienzaniso ye 'maitiro' ekuve mutungamiriri weshanduko anogona kutungamira shanduko ikozvino uye mune ramangwana rebasa. Nekuda kweiyo Cheryl's solid solid and ratings ratidzo, takasarudza kumudzosera kuzotiratidza kuMusangano Wegore-Mid. "
Mutevedzeri weMutungamiriri weDzidzo Yehunyanzvi PRSM Sangano
"Isu takave neGartner Musangano wegore negore weData Center, Zvivakwa, & Nyanzvi dzekushanda uye takadzosa Cheryl Cran, ramangwana rebasa uye shanduko nyanzvi yehutungamiriri, kuzopa sechikamu chedu hutungamiriri. Chikamu chaCheryl Hutungamiri @ Iyo Core Yekuchinja yakagara-yakanyorwa uye izere zvekare zvakare gore rino. Vateereri vedu vanonzwisisa vevatungamiriri veIT vari kutsvaga mhinduro dzinooneka, mazano uye kurudziro sezvo vari kupihwa basa rekugonesa, kukurudzira uye kushandura nzvimbo dzebasa ravo remangwana rebasa. Cheryl akaendesa chaizvo zvaidikanwa uye nezvimwe - ongororo yake uye manhamba, ayo akaunzwa muvhidhiyo, uye yake yekudyidzana yakanangana maitiro yaive yekurova kwechokwadi neboka redu. Tinotarisira kuzoshanda naCheryl zvakare. ”
"Cheryl Cran, Ramangwana reBasa uye Shanduko yehutungamiri nyanzvi yakanga yakanaka kwazvo neakataura kiyi" Ramangwana Rebasa - Wese Munhu Anotungamira Shanduko "- takanga tine mashoko akadai sa" Cheryl ndiye akakurukurira mutauri mukuru ataura isu " "Maitiro aCheryl ekushandisa kudyidzana pamwe nekunakidzwa uye nekumanikidza zvemukati zvaive zvinoshamisa". Yedu yeVIP yega yega yakawana bhuku raCheryl "Unyanzvi hwekuchinja hutungamiriri - Kutyaira Shanduko Munyika Inokurumidza Kufamba Pasi Pese" uye vakafara kutaura naCheryl mushure megwaro rake raikosha iye achisayina yega yega yemakopi. Cheryl nemaneja wake wehofisi Michelle timu inosimudzira - nyore kubata nayo isati yasvika, mukati meye mushure mechiitiko. Ndatenda Cheryl nekutibatsira kutipa kukosha kwakanyanya kune vedu vanopinda AIIM 2017 ″
G. Clelland, VP Zviitiko AIIM
"Isu takange tiina Cheryl atibatane saKeynote Mutauri weMusangano wedu weGEA muPuerto Vallarta muna Ndira 2017. Cheryl chirevo chikuru Iyo Ramangwana reKurima NDIPO! yakanga iri budiriro huru nevateereri vedu vevatengesi vanonzwisisa uye vatengi vari muindasitiri yezvekurima. Maitiro ake akasarudzika asi achibatirana nekufunga kwekutsidzira kwakaumba izvo zvakazara neboka redu. Cheryl yakapa ruzivo nezve ramangwana rehutungamiri uye kuti hutungamiri huri kushanduka sei mukupindura kuwedzera tekinoroji uye kuverengeka kwevanhu kuchinja. Akapokana neboka kuti vashandure hunyanzvi hweutungamiri hwavo nekusimudzira 'mashandiro avo' ayo anosanganisira kuve nekugadzira simba, hunyanzvi uye kuwedzera hunyanzvi hwekutungamira zvikwata zvevazhinji. Mano ake pakunyora nekuchengeta aive akavhura ziso uye isu taida kuti akapa 'mafambiro ekuita' kuti vateereri vadzokere kunzvimbo dzavaishandira. Cheryl akarohwa chaizvo neboka redu! ”
"Cheryl Cran aive wekutaura kwedu kumusangano weCentral 1 Chikwereti uye aive sarudzo chaiyo! Mutsara wake wakakosha unobva mubhuku rake idzva, Unyanzvi hwekuchinja Hutungamiri ndizvo chaizvo zvaida boka redu revatungamiriri veCredit Union. Vazhinji vevatungamiriri vakataura kuti vakadzidza chimwe chinhu chitsva, kuti vaikoshesa maitiro Cheryl anotora pane ramangwana rebasa uye nekuchinja hutungamiriri. Chimiro chake chemashoko chinonakidza, kupindirana, kufunga pfungwa uye kupfuura zvese zvinopa mazano anoshanda ayo vatungamiriri vanogona kushandisa ipapo ipapo. Cheryl ndiye akave akakosha pamusangano wedu. ”
Central 1 Chikwereti Union
"Cheryl Cran akakurudzirwa zvikuru nerimwe boka raKaiser raakange achishanda naro- uye isu nguva pfupi yadarika takamupa basa seyekuvhara Mutauriri weKeynote kumusangano wedu wepagore - akakwana zvakakwana! Meseji yaCheryl yaive yakagadzirirwa zvizere zvichienderana nebhizinesi redu, vateereri vedu vakasiyana uye akavhara musangano wedu zvakanaka. Iye akagona kuruka mune zvemukati kubva kune zvimwe zvinhu zvechirongwa pamwe nekutenderera mumatambudziko akasarudzika ari kutarisana nevanhu muzvikwata zvedu uye nekupa mazano anokurudzira. Bhizinesi rake uye ruzivo rwake pamwe nekunzwisisa kwake kwakanaka uye kuendesa zvine simba zvakapa boka redu kurudziro uye yaive nzira yakanaka yekupedzisa musangano wedu! ”
VP Federal Wevashandi Inobatsira Kaiser Permanente
“Cheryl Cran haasi Sheryl Crow asi iye ndiye dombo nyeredzi hapana kana nepadiki! Isu takave naCheryl semutauri wedu wekuvhara wekupedzisira kwezvirongwa zvezvikwata zvedu zvehutungamiriri. Cheryl akashanda nesu pazviitiko zvinopfuura gumi nemaviri kwaakaendesa kune vangangoita 6000 vatungamiriri pazvikwata zvakagadzirira ramangwana. Kukwanisa kwake kuruka mamessage evamwe varatidziri, kugona kwake kubatanidza mapoka nekuseka, kunakidzwa, kwechokwadi uye pfungwa inokwezva zvaingova zvinoshamisa uye ZVAKANAKA zvataida sepedyo nezviitiko zvedu. "
VP AT & T Yunivhesiti
"Cheryl Cran yaive yedu 2nd zuva Keynote mangwanani musangano wedu wepagore September 2016 uye nezwi 'WOW!' Cheryl anounza inoshamisa simba, mukati, anoshandisika mazano uye zvakawanda mune yake keynotes. Boka redu raimuda achifarira uye achiisanganisa maitiro anosanganisira kuve nevateereri mameseji mameseji uye kushandisa social media kumubvunza mibvunzo mukati merondedzero yake yakakosha - yehudyu! Iye akaita kuti tiseke uye akatiita kuti titarise isu toona kana tave kuita vatungamiriri vanochinja. Ida zviyero zvekudyidzana kwevateereri pamwe nemhando dzakasimba kwazvo dzinopa vanhu 'nzira' yekunyatso gadzira uye maitiro ekunyatsochinja mune ramangwana rebasa. Munhu wese akasiya nguva yake achinzwa kusimbiswa, asimba uye akagadzirira kuronga ramangwana izvozvi! ”
J. Moore BC Kwemari Hutano Hwehutano Vanyanzvi
"Cheryl Cran aive mutauri akakosha ku Musangano Wedu weVashandisi - uye neshoko aive" akanaka ". Her keyword "Inotungamira Shanduko mune Yekukurumidza Paced & Tekinoroji Kunzvimbo Yekushandira," yaive yakakwana kuboka redu revashandi vezvehutano. Vanhu vaimuda nekukurumidza uye pa-poindi dhirivhari pamwe chete nemamodheru ayo airatidza 'maitiro' ekuchinja shanduko uye hunyanzvi hunodiwa. Iko kutarisisa kweyechokwadi-nguva yekugadzira mhinduro kwaive kwakakosha kune iri boka uye zvinhu zvekuita zvakapa munhu wese zvimwe zvinhu zvinonyanya kukosha kuti vaise mukuita kumashure pabasa. Cheryl anoenzanisira zvaanotaura nezvazvo - pamberi, panguva uye mushure mehurukuro iye aichinjika uye zviri nyore kushanda nazvo. Tinokurudzira Cheryl kumusangano wenyu! ”
Tricia Chiama, Sr. Coordator, Dzidzo uye Kudzidzira Services InSight
"Cheryl Cran chaive chinhu chakakosha kumusangano wedu weGore Rese, kuunza simba nemufaro semukurukuri wedu wekutaurira pachena pakuvhurwa kwemusangano wedu. Cheryl akagovana izvo zvaanoziva uye ruzivo nezve ramangwana rebasa uye shanduko yehutungamiriri, achigadzirisa mharidzo yake kune bhizinesi redu uye vateereri. Takashanda padhuze naye kuona kuti kutumira meseji musangano wese kwakarongeka, kwakakodzera, uye nekukosheswa kwemuboka redu. Akabatsira kukurudzira timu yedu, achisiya vanhu vane mazano avanogona kuisa ipapo ipapo munyika yanhasi iri kuchinja nekukurumidza kubasa. Takafarira chaizvo kuve naCheryl sechirevo chechinyorwa chikuru uye tichimutenda nezvavakapa mukusimudzira kambani yedu kuti ifunge uye iite zvakasiyana kuti ibudirire mune ramangwana. ”
"Cheryl Cran aive mutauri wedu mukuru kumusangano wedu weSirkRoad wepagore uye neshoko aive akanaka! Yedu tech savvy HR vateereri vakafadzwa chose necheryl maitiro uye kuendesa kwakakosha kwazvo, kwakakosha uye kwakakosha zvemukati zvine chekuita hutungamiriri uye neramangwana rebasa. Cheryl akadenha isu tese kuti 'tikwidziridze hutungamiriri hwedu OS' uye kuti tiwedzere kugona kwedu nguva chaiyo. Akapa mamiriro evateereri vedu kuti vanzwisise nzira yekutungamira nekugadzirisa shanduko inokanganisa. "
"Cheryl aive mumwe wevatauriri vedu vepamusoro pamusangano wedu wepagore wevatungamiriri - Cheryl chinyorwa chakakosha Chiitiko cheKushanda Iye Zvino chaive chakanakira boka redu. Iyo indasitiri yemari iri mukushanduka kukuru uye kukanganisa - Cheryl yakapa kutsvagisa uye maturusi evatungamiriri vedu kuti vakwanise kuwedzera hunyanzvi uye hunyanzvi pavanenge vachinakidzwa. Mharidzo yake yakabatsira kutiyeuchidza nezvezvinhu zvatinofanira kuita zuva nezuva sevatungamiriri kuri kukurudzira kukura uye hunyanzvi. Vhidhiyo ine huwandu neyekutarisirwa nyaya dzekuenzanisira dzaakapa dzemakambani ari padanho rekutanga remangwana rehurongwa hwebasa akabatsira kupa mamiriro kune zvatiri kunyatsoita chaizvo uye izvo zvatingaramba tichivandudza. Boka redu rehungwaru revatungamiriri rakafemerwa uye Cheryl wove mumashoko akakosha kubva kune vakataura zvekare kuti zviitise gwaro rinokosha rekupedzisira kumusangano wedu! "
L. Skinner CEO Wekutanga West
"Isu takave naCheryl semukurukuri wedu wekutaura uye hurukuro yake" Nyika Dzesimba - Chakavanzika Chekuita Nekuita muKushandira "yakatambirwa zvakanaka nenhume dzedu. Ongororo yaCheryl yekutanga chiitiko, iyo yatakatumira pachinzvimbo chake, yakamutendera kuti agadzirise chirongwa chake uye zvichienderana nemhinduro dzaakatambira, akagadzira mharidzo yaive izere nesimba guru kubva pakutanga kusvika kumagumo. Tsvagurudzo yaCheryl mune ramangwana rebasa uye marongero ake ekutungamira shanduko nekushandisa simba kwaive kutungamira. Waita basa Cheryl! ” T. Tse maneja, Zviitiko Chartered Professional Accountant yeBritish Columbia
"Chirevo chikuru chaCheryl Cran" Ramangwana reBasa - Wakagadzirira "rakanangana zvakaringana nemusoro weHRIA Musangano unoti 'Kufambisa Booms neMabhazi'. Cheryl akatora nguva yekunyatso kuziva vatinopinda vasati vaendesa ino yakasarudzika yekuvhara kiyi. Ongororo yaCheryl pre-musangano uye kusvika kwake mangwanani echikamu kuzoona mharidzo dzezuva rekuruka zvemukati mumashoko ake ekuvhara zvaive zvakashamisa. Kushandisa kwaCheryl kwekutsvagisa, maturusi akasimba ekutibatsira neiyo 'sei' uye inonakidza nzira yekudyidzana yaive yakarova nevateereri vedu vanonzwisisa. Akaita iro boka kuburikidza nemibvunzo yemavara uye yedu Twitter hashtag yaive ichifamba panguva uye mushure memusangano wake. Cheryl anofadza chose kushanda naye. ”
J Chapman, CMP Human Resource Institute of Alberta
"Cheryl Cran akagogodza kunze kwepaki!" Cheryl ndiye akavhura kiyi yekutanga pamusangano wedu wepagore musi waApril 1st, 2016 uye yaive kutanga kwakakwana kusvika zuva. Iye aikwezva, achikurudzira, nekuseka kukuru kuseka! Mharidzo yake yaive iri pamusoro-wenyaya uye yakakodzera zvakanyanya mumazuva ano ekushandira nzvimbo Ndingamukurudzira zvikuru musangano wako! ”
Sachigaro weMusangano CUMA
“Ndinotenda zvakare nechirongwa CHINOSHAMISA nezuro. Ruzhinji rwangu rwakaoma kufadza, uye ini ndakabva ndagamuchira yakawanda yakanaka mhinduro mushure mekutaura kwako. Iwe waive nechikwata chakapa simba, kunyatsoteerera uye kutora chikamu mune yaive musangano wekupedzisira wekutora kwemazuva maviri. Haisi basa riri nyore. Ini ndinogona kukurudzira iwe chero nguva! Ndinotenda zvakare uye ndinovimba kuti nzira dzedu dzinogona kuyambuka munguva pfupi iri kutevera. ”
CBC & Radio-Canada Midhiya Solutions
"Cheryl Cran aive mutauri wedu wepamberi wekutaura pane yedu NOHRC 2016 Musangano - nhaurwa yake inotungamira Inotungamira ne2020 Vision - Shandura Hutungamiri hweHR Professionals hwakanga hwakanangana neboka redu revashandi veHR! Mharidzo yake yekushandura hutungamiri uye kugadzirira ramangwana rebasa izvozvi ndizvo chaizvo zvatiri kuda kunzwa. Cheryl akaita kuti vateereri vedu vabatane, vataurirane, vachiratidzira nehasha uye vachitumira mibvunzo yake yaakapindura zvakananga uye nekufunga. Takagamuchira mhinduro inoshamisira kubva kune vatakapinda - isu chaizvo tinokurudzira Cheryl Cran pamusangano kana chiitiko! "
Sachigaro weNAHRR Musangano 2016
"Isu takave naCheryl Cran semukurukuri wedu wekutaura pamusangano wedu uchangopfuura wevatengi uye meseji yake ye" Kutungamira Shanduko Mune Yekutsanya Paced & Tekinoroji Yekushandira "yaivepo. Isu taida tech savvy uye vanhu savvy nyanzvi avo vanogona kuendesa meseji kune vatengi vedu iyo yaizowedzera kukosha kwavari muindasitiri yehutano uye zvakare kupa mameseji ekushanduka kwenzvimbo yebasa. Maitiro aCheryl ekunakidzwa paanounza akakosha uye anodikanwa meseji yeiyo 'yakagovaniswa hutungamiriri' nzira, kushanda pamwe nezvizvarwa uye tekinoroji tekinoroji yakagamuchirwa nevapindi vedu nechido chikuru. Takakumbira mameseji ekuti "torai" anokwanisa kuiswa uye Cheryl akatipa izvo uye nezvimwe - tinonyatsoshanda naCheryl zvakare ".
Chigaro / Murongi Chechishanu pagore Crowe Healthcare Summit 2015
"Cheryl Cran aive mukurukuri mukuru weHospitality Leadership Forum, chikamu cheInternational Hotel, Motel & Restaurant Show. Vateereri vedu vatungamiriri vemakambani ekugamuchira vaenzi uye vadzidzi vakagamuchira meseji yaCheryl yekuti 'hutungamiri hwakagovaniswa' uye kuda kwekuvandudza hutungamiriri hwake. Kuratidzwa kwaCheryl kwaive kwakasiyana-siyana uye kunotenda kuvateereri vake kusangana, kuseka, uye tekinoroji. Cheryl akakurudzira vaipinda kutumira mameseji uye tweet mukati mese - kukurudzira kukuru kusvika padanho rekuita. Mhinduro yakagamuchirwa kubva kune vaipinda yaive yakanaka kwazvo, uye anga achiwedzera zvinotyisa kuchirongwa chedu chemusangano. ”
K. Moore, Director Musangano & Zviitiko American Hotel & Yekugara Association
"Cheryl Cran akatungamira musangano wedu wepagore weExecategor Strategy muna Kukadzi 2014 uye tinofara nezvakabuda. Nerubatsiro rwaCheryl takakwanisa kuongororazve uye kuwana kujekesa pane yedu meseji meseji kune vatengi vedu, izvo zvinofanirwa kuitika mukati kuzadzisa vimbiso yechiratidzo uye izvo isu sevatungamiriri vatungamiriri zvatinofanira kushandura kuitira kuti titungamire kambani mune inotevera nhanho yekubudirira. . Cheryl akapedza nguva neni uye nechikwata pamberi pemusangano wezano mune akateedzana emisangano yekufona kuunganidza zvinongedzo uye dhata kuti dzibatsire kuumba gwara remusangano wezano. Akagadzira ongororo yepamhepo kuunganidza ruzivo uye maonero avo pachavo pamatambudziko uye nemikana yekambani uye nemaonero akaita timu yepamusoro. Cheryl ane yakasarudzika kugona kuunganidza rakakura dhata uye zvemukati, kusefa kuburikidza nazvo wozopa yakajeka uye yakapusa nzira iyo inobatsira vatungamiriri uye bhizinesi kukura. Maitiro ake akananga asi anonakidza uye anonzwisisa zvakadzama mukukura kwake kunodiwa nemunhu wega wega kuitira kuti iye agone kupa pamatanho epamusoro kuzvinangwa zvekambani. Cheryl senyanzvi yehutungamiriri anotaurirana, kugadzira uye mhedzisiro yakatarwa tinotarisira kuzoshanda naye zvakare. ”
"Mharidzo yaCheryl Cran kuboka redu reManagement, Vakuru Vanotungamira uye nevamwe vaive mushoko rinoti, TIMELY! Isu takave nemusangano wekutungamira wegore-mbiri uye Cheryl ndiye aipedza kutaura nemutambo wedu wemazuva maviri. Kugona kwake kuruka mune zviri parizvino kune zvemubatanidzwa mamiriro pamwe nekuvapo munzira inonakidza, yakangwara uye inomutsa pfungwa inoshamisa. Takave neruzivo rwakanaka chose kubva kumusangano waCheryl nemafungiro ekuti meseji yake ndiyo yaive pedyo kwazvo nechiitiko chemazuva maviri uye kuti vakanzwa kufuridzirwa uye vachidawo kuchinja maitiro avo pabasa ravo nekuda kwekumunzwa. "Cheryl akauya nekutsvaga, kugona kubatanidza, huchenjeri hwenyika uye nezvimwe kubatsira kuti musangano wedu ubudirire zvinoshamisa."
"Cheryl Cran chirevo chikuru chetungamira Change ne2020 Vision yaive pamari chaipo! Nhengo dzedu dzeEO Arizona Chitsauko ndevanamuzvinabhizinesi vane bhizinesi rakabudirira uye vakarerwa nezvirimo uye kukosha kwebhizinesi kwekuratidzwa kwaCheryl. Ane hunyanzvi hwekugona kuenderana nekusiyana kweboka - takanga tiine maindasitiri anopfuura gumi nemaviri muvateereri - uye anokwanisa kupa kutsvagisa kutsigisa kunojekesa kudiwa kwevatungamiriri vebhizinesi kuti vatungamirire shanduko kukurisa bhizinesi rinoshandisa zvinobudirira. hunyanzvi hwekutaurirana nharaunda yemabasa mazhinji. "Mhinduro dzake dzekushandura dzinosanganisira tekinoroji yekushandisa, kushandisa hunyanzvi midhiya, kuvaka zvekare hutungamiriri hwekushandisa uye nezvimwe zvakawanda. Mhinduro kubva kuboka redu revamuzvinabhizimusi vakapinda yaive yekuti vaifunga kuti Cheryl's Keynote akavapa kukosha kwazvo kwekuenda kumba kupfuura chero chinhu chavakambopinda muzviitiko zvekudzidza zvakapfuura. "Chokwadi tichashanda naCheryl zvakare!"
Executive Sangano, Arizona Vantage Retirement Zvirongwa
"Cheryl Cran aive mutauri wedu wekuvhara pamusangano wedu weGAM wevanoongorora zvemukati - akakwana zvakadii! Mharidzo yake pamusoro peKutungamira Shanduko yaive yakajeka kumatambudziko nemikana yevatungamiriri vedu muindastiri yedu. Cheryl's pre chiitiko ongororo yakaunganidza vateereri njere idzo dzakamubatsira kugadzirisa zvizere mharidzo yake. Uye zvakare, akaenderera pamusoro nekupfuura nekutsvagisa mharidzo pamberi pake kuti aise zvikamu zvakakosha mumharidzo yake. Iye ainakidza, akananga uye akapa zvinomutsa uye zvinomanikidza nzira dzehutungamiriri dzeboka redu. Aida kuti akapa "zviito zvekuita" kumagumo kuti vanhu vabvise mazano uye vashandise mumamiriro avo ekudzidzira. Ndinokurudzira Cheryl pachiitiko chako kana musangano. ”
Director, Musangano Institute of Yemukati Auditors
"Cheryl Cran aive mutauri wedu wezuva repiri pazuva rechipiri reUniverCITZy Musangano weBc Ministry yeTechnology, Innovation neCitizens 'Services uye akaitawo musangano wekutevera pamwe nekutaura kuExecutive Team pakudya kwemangwanani. Cheryl's hurukuro Inotungamira ne2 Vision uye nemusangano wake Iyo Evolutionary Mutungamiri akange akashamisa! Iye chaiye aive nevateereri vedu vese vanogara uye livestream vateereri vari kure vachida zvimwe. Cheryl yakasarudzika dhiraini dhizaini inosanganisira kubatana nekukurumidza uye padhuze neboka, ichipa njere uye kufunga pfungwa dzinopisa, mazano anoshanda uye mhinduro kwatiri kuti tiite. Mimhanzi yake yakaita kuti titambe muzvigaro zvedu, kudyidzana kwaive kwatakaita uye zvirimo zvakaita kuti tiwedzere kufunga kwedu. Tichashanda naCheryl zvakare! ”
S. Biblical, Senior Advisor, Vanhu & Kurongeka Kwekuita BC Ministry yeTekinoroji, Kuvandudza uye Citizens 'Services